गर्भनरको निलम्बन पछि विवादमा परेका अर्थमन्त्रीले फेरी किन बोलाए पत्रकार सम्मेलन ? « Etajakhabar
गर्भनरको निलम्बन पछि विवादमा परेका अर्थमन्त्रीले फेरी किन बोलाए पत्रकार सम्मेलन ?
गर्भनरको निलम्बन पछि विवादमा परेका अर्थमन्त्रीले फेरी किन बोलाए पत्रकार सम्मेलन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेपछि विवादमा परेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो धारणा राख्न पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका छन्।
अर्थमन्त्री शर्माले आज सोमबार अपराह्न चार बजे मन्त्रालयमा नै पत्रकार सम्मेलन बोलाएका हुन्।
त्यसक्रममा अर्थमनत्रीले गभर्नरलाई निलम्बन गर्नुको कारणबारे स्पष्ट पार्ने बताइएको छ। अर्थतन्त्र समस्यामा परिसक्दा पनि अर्थ मन्त्रालयलाई नसघाएको तथा सूचना लुकाएको आरोपमा अर्थमन्त्री शर्माकै सिफारिसमा गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन भएपछि गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।
यो पनि, नेपाल राष्ट्र बैंककी कायममुकायम गभर्नर डा।निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चाप कायम रहेकाले केही समय धैर्य गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। सोमबार काठमाडौंमा भएको तेस्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनमा बोल्दै कायममुकायम गभर्नर ढुङ्गानाले लघुवित तथा समग्र बैंकिङ क्षेत्र नै तरलताको चापबाट गुज्रिरहेकाले सबैले केही समय धैर्य गर्नु पर्ने बताएकी हुन्।
उनले बैंकिङ क्षेत्र मात्रै नभएर लघुवितमा समेत तरलता र ब्याजदरको समस्या रहेको बताइन्। तरलता तथा ब्याजदरमा आएको उतारचढावको कारण समग्र अर्थतन्त्र र जनताले पीडा भोग्नुपरेको कायममुकायम गभर्नर ढुङ्गानाले दाबी गरिन्। उनले व्यापार चक्रको पनि साइकल हुने भएकाले विस्तारै सबै कुरामा सुधार आउँदै जाने बताइन्।
नेपालको गरिबी निवारण तथा वित्तीय पँहुचभन्दा बाहिर रहेका जनसंख्याको २० प्रतिशत समुदायलाई लघुवित संस्थाहरु प्रभावकारी साधन भएको उल्लेख गरिन्।
उनले भनिन्, ‘समावेशी आर्थिक विकासका लागि भएका नेपालमा भएका विभिन्न प्रयासका बाबजुद नेपालको कुल जनसंख्याको १८ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छ। अझै पनि २० प्रतिशत जनसंख्याको हिस्सा औपचारिक वित्तीय पँहुचभन्दा बाहिर रहेको स्थितिमा लघुवित वित्तीय संस्थाहरुले गरिबी निवारण, आर्थिक समावेशीकरण र समग्र आर्थिक विकासको लागि निश्चय नै प्रभावकारी साधन मानिएको छ।’
किन्ने होइन ? यस्तो छ आजको सुनचाँदी भाउ
डल्ले खुसार्नी बाट मालामाल बन्दै भोजपुरका किसान, छ करोडभन्दा बढी आम्दानी